भ्रष्ट्राचारीलाई कालोमोसो दल्छु भन्ने मेयरको कालो कथा, अनियमितताका अनेक चर्तिकला || Postpati : News For All
भ्रष्ट्राचारीलाई कालोमोसो दल्छु भन्ने मेयरको कालो कथा, अनियमितताका अनेक चर्तिकला
टेण्डर छल्न ८ टुक्रा ! चर्पीमा बेग्लै कोटेसन (प्रमाणसहित)
पोष्टपाटी २०७६ जेष्ठ २७, सोमबार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय :5मिनेट
जेठ २७, इटहरी । उपमहानगरपालिकाको पुरानो बिल्डङको छेवैमा रातो छानो भएको एक तल्ले छाप्रोे छ । त्यही छाप्रोभित्र छन् मेयर द्वारिकलाल चौधरी उपमेयर लक्ष्मी गौतमका कार्यकक्षहरु ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीको कार्यकक्ष (मेयर भवन) निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । यो समाचार अनलाइन खबरमा छ ।
रातो छानाभित्रको कालो कथा !
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सरकारी निकायले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका कामहरु गर्दा/गराउँदा सार्वजनिक सूचनामार्फत टेण्डर आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुपर्छ । तर, इटहरी उपमहानगरपालिकाले ५ लाखभन्दा बढीको एउटै आयोजनालाई टुक्राएर कोटेसनमार्फत विानप्रतिस्पर्धा काम गराउँदै आइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ‘मेयर भवन’ बनाउने निर्णय उपमहानगरपालिकाले गर्‍यो । ०७४ असारपछि मेयर द्वारिकलाल चौधरीले चुनाव जितेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मेयर भवन बनिरहेको थियो । यो भवन बनाउने निर्णय मेयर चौधरीले गरेको नभएर चुनावअघि नै कर्मचारी र दलहरुको सर्वदलीय संयन्त्रले गरेको थियो ।
सबै काम कोटेसनबाटै
हेर्नुहोस् २२ लाख रुपैयाँका ‘अन्य कार्यहरु’